आत्मविश्वासले अग्ला - Himalkhabar.com
रिपोर्टशुक्रबार, पौष २४, २०७२
तीन दाजुभाइ र चार दिदी–बहिनीमा सबैभन्दा होचा ज्याकलाई देखेर आमाबुबा सारै दुःख मान्थे। गाउँलेले जिस्क्याउँथे। आफू किन यस्तो भएछु भन्ने कुराले उनलाई बारम्बार पिरोल्थ्यो। तर, उनै ज्याक अहिले शानको जीवन बिताइरहेका छन्। गोदावरी, ललितपुरस्थित एभरेष्ट म्यानपावर कम्पनीका प्रबन्धक उनले साउदी अरबमा तीन वर्ष र दुबईको होटलमा ८ वर्ष काम गरे।
नक्खुमा घर पनि बनाए। आफूभन्दा अग्लीसँग विवाह गरेका उनी दुई सन्तानका बाबु बनिसकेका छन्। चारचक्के स्कूटरमा आउजाउ गर्छन्। होचा ज्याकको अग्लो प्रगति देखेर सबै अचम्म मान्छन्। “म स्वयंलाई यतिसम्म गर्न सक्छु जस्तो कहिल्यै लागेन”, बीबीएसम्म पढेका उनी भन्छन्, “तर, शिक्षा र सीप भयो भने उँचाइले केही फरक नपार्ने रहेछ।”
पनौती, काभ्रेकी रेणुका श्रेष्ठ (३५) तीन बहिनी र एक भाइकी दिदी हुन्। तर, उनी सबैभन्दा कान्छी जस्ती देखिन्छिन्। व्यापारका क्रममा उनको परिवार सर्लाही पुगेपछि उनले त्यहीं प्लस टु पढिन्। “मान्छे यति सानो, पढ्ने कक्षा ठूलो भनेर साथीहरू हेप्थे”, रेणुका सम्झिन्छिन्। तर, ३ फीट १० इन्चमै बढ्न रोकिएकी उनलाई आमाबुबाले भने सधैं पढ्न प्रोत्साहित गरे।
१० वर्षअघि काठमाडौं बसाइँ सरेयता उनले सिलाइ, इम्ब्रोइडेरी, कम्प्युटर तालीम लिइन्। तर, जागिर दिन कोही तयार भएनन्। २०६९ सालमा रेणुकाले ७ महीना लगाएर कानूनी लेखन सम्बन्धी आधारभूत तालीम लिइन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जका उपप्राध्यापक डा. सूर्यबहादुर थापाका अनुसार उँचाइ नबढ्नुमा वंशाणुगत गुण, जन्मँदा कम तौलका बच्चा, पोषण अभाव, दीर्घरोग प्रमुख कारण हुन्। उनी उँचाइ बढ्न रोकिएमा कारण पत्ता लगाई उपचार गर्न सकिने बताउँछन्। ‘वशांणुगत बाहेक अन्य कारणको उपचार गर्न सकिन्छ’ डा. थापा भन्छन्, “यसका लागि
समयमा नै जाँच गराउनुपर्छ।”
४ फीटकी पुर्कोट, तनहुँकी निर्मला केसी (२९) लाई समयमै परिवारले उपचारमा ध्यान दिएको भए आफू पनि औसत महिला झैं अग्ली हुनेथिएँ भन्ने आजसम्म लागिरहन्छ। जन्मिएको महीना दिनमै उनले आमा गुमाइन्। लगत्तै बाबुले अर्को बिहे गरे। शिशु अवस्थामा स्याहार नपुगेकै कारण उनको उँचाइ स्वाभाविक रूपमा बढ्न सकेन।
उँचाइ जाँच गराउन १२ वर्षको उमेरमा उनी सानिमासँग काठमाडौंस्थित शिक्षण अस्पताल आइपुगिन्। डाक्टरले उपचारका लागि भारत जान सुझाए। तर, बुबा मानेनन्।
‘दुःखी हुने कारण छैन’
अहिले उनी माछापोखरीस्थित निर्णायक बचत तथा ऋण सहकारीमा काम गरिरहेकी छन्। सामान्य व्यक्तिले जति धेरै शारीरिक श्रम गर्न नसके पनि श्रीमान्को
सहयोगले खुशी–खुशी परिवार चलेको निर्मला बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “धन्न अरूको भरमा बस्नु परेको छैन।”
तर, यस्तो पनि दिन थियोे, जब उनको उँचाइ (चार फीट चार इन्च) हेरेर साथीहरू गिज्याउँथे। ‘तैंले केही गर्न सक्तैनस्’ भन्थे। अरू त अरू परिवारका सदस्यसमेत व्यंग्य गर्थे। ६ सन्तानमध्ये उनी जस्तै होची एक जना दिदीले पनि यस्तै दुर्व्यवहार सहनुपर्थ्यो। अन्ततः उनले घर छाडे। र, बाहिरै बसी हस्तकला सिक्न थाले।
आफ्नै मिहिनेतले प्रारम्भिक सीप सिकेपछि उनले उद्योग सञ्चालन गर्न परिवारसँग अंशको साटो रु.३० हजार दिन अनुनय गरे। तर, अपमान मात्र पाए। उनी भन्छन्, “६ वर्षसम्म पैसा जोहो गरें, अनि उद्योग खोलें।” एक छोराका बाबु उनी आफूभन्दा अग्ली श्रीमतीसँग खुशी छन्।
बैसाखीको सहारामा हिंडडुल गरिरहेका दलबहादुरले गएको साउनमा राजधानीको भृकुटीमण्डपमा रु.७ लाखको लगानीमा ‘हाम्रो खाजा घर’ खोलेका छन्। “होटल, रेस्टुरेन्टमा काम गरेको अनुभवले खाजा घर चलाउन खोजेको छु”, उनी भन्छन्, “साथीभाइले पनि सहयोग गरे।”